फोहोरबाट ग्यास उत्पादन, प्रति सिलिन्डर मात्र ९ सय रुपैयाँ ! – Everest Dainik – News from Nepal
फोहोरबाट ग्यास उत्पादन, प्रति सिलिन्डर मात्र ९ सय रुपैयाँ !
परासी, साउन ११ । फोहोरबाट बायोग्यास । दिनको १५० सिलिन्डर उत्पादन । एक सिलिन्डरको ९०० रुपैयाँ मात्र । हो पश्चिम नवलपरासीको सुक्रौलीमा ‘फोहोरबाट मोहर’ बन्न थालेको छ । इन्भिपावर इनर्जी एन्ड फर्टिलाइजर प्रालिले फोहोरबाट ग्यास निकालेर बेच्न सुरु गरिसकेको छ । उद्योगका कार्यकारी सञ्चालक अभिरथ अग्रवालका अनुसार पहिलो चरणमा औद्योगिक उपभोक्तालाई उपलब्ध गराइएको छ ।
‘रामग्राम नगरपालिकाका बजार क्षेत्रमा तत्काल पाइपलाइनबाट भान्सा-भान्सामा ग्यास पुर्याउने लक्ष्यछ’, उनले भने, ‘यो सस्तो मात्र होइन वातावरणमैत्री पनि छ।’ कुहिने वस्तु यसको कच्चा पदार्थ हो । फोकोर, कुखुराको सुली, गोबर, चिनी मिलको छोक्रा आदि प्रयोग गरिन्छ । पहिलो चरणमा परासी र भैरहवाका उद्योग एवं होटलले यसको उपभोग थालेका छन् । ‘यसको हिटिङ पावर अन्य ग्यासको भन्दा २५ प्रतिशत बढी छ,’ अग्रवालको दाबी छ, ‘त्यसैले यो फारो पनि हुन्छ ।’
उद्योगले कच्चा पदार्थका लागि नवलपरासी, बाँके, दाङ, रुपन्देहीलगायत जिल्लाका स्थानीय तहसँग फोहोर व्यवस्थापनमा सहकार्य गर्नेबारे छलफल भइरहेको जनाएको छ । केहीसँग त सहकार्य सुरु भइसकेको छ । उद्योगमा ३ हजार ७ सय ५० घनमिटरको प्लान्ट स्थापना गरिएको छ । कान्तिपुरमा खबर छ ।
ट्याग्स: अभिरथ अग्रवाल, इन्भिपावर इनर्जी एन्ड फर्टिलाइजर प्रालि, पश्चिम नवलपरासीको सुक्रौली, फोहोरबाट ग्यास